Ogeysiiska Sharciga - Laser Dahab ah
Degelkan waxaa iska leh, maamula oo gacanta ku haya WUHAN GOLDEN LASER CO., LTD. (abbr. Laser Dahab ah). Waxaa lagaa rabaa inaad aqriso shuruudahan adeegsiga kahor intaadan isticmaalin. Kaliya waxaad ku dhexfariisan kartaa shabakaddan iyada oo shardi u ah aqbalida ereyadan.
Dhammaan waxyaabaha ku jira websaydhkan ayaa loogu talagalay oo keliya ujeeddo shaqsiyadeed oo aan loogu isticmaalin ganacsi. Xuquuqda daabacaadda iyo ogeysiiska xiriiriyaha waa inaad adigu xushmeysaa. Laguuma oggola inaad wax ka beddesho, nuqul ka sameyso oo daabacdo, soo bandhigto waxyaabahaas ujeeddo ganacsi darteed. Dabeecadaha soo socda waa in laga mamnuuco: ku dhajinta websaydhkan shabakadaha kale iyo barnaamijyada warbaahinta; adeegsi aan la fasaxin oo lagu xad gudbo xuquuqda daabacaadda, astaanta iyo xadka kale ee sharciga ah. Waxaad fiicnaan laheyd inaad joojiso ficillada oo dhan haddii aadan ku raacsaneyn xeerarka kor ku xusan.
Macluumaadka degelkani wuxuu ujiraa ujeedo ah adeegsi qaas ah mana loo dammaanad qaadi karo nooc kasta. Ma hubin karno saxsanaanta buuxda iyo isku xirnaanta waxyaabaha ay ka kooban tahay taas oo isbadal ku imaan karta ogeysiis la'aan. Si aad wax badan uga ogaato badeecadeena, softiweerka iyo hordhaca adeegga, waxaad la xiriiri kartaa wakiilka ama wakiilka ay u magacawday 'Golden Laser' meesha aad degan tahay.
Soo Gudbinta Macluumaadka
Macluumaad kasta oo aad soo dirto ama aad email noogu soo dirto adoo adeegsanaya degelkan looma tixgelinayo inuu yahay mid sir ah oo xaq u lahayn. Golden Laser wax mas'uul ah kama qaadi doono macluumaadkan. Haddii aan horay loogu dhawaaqin, waxaa lagaa qaadi doonaa inaad ogolaato hadalada soosocda: Golden Laser iyo shaqsigeeda idman waxay xaq u leeyihiin inay adeegsadaan macluumaadka macmiilka, sida xogta, sawirka, qoraalka iyo codka adoo koobiyeya, oo bixinaya, daabacaya iyo wixii la mid ah on. Annagu mas'uul kama nihin wax kasta oo meel ka dhac ah, sumcad dilid, ama anshax xumo ah oo lagu dhajiyo looxyada farriimaha ama astaamaha kale ee Is-dhexgalka ee Bogga. Waxaan xaq u leenahay marwalba inaan kashifno macluumaad kasta oo aan aaminsanahay inay lagama maarmaan u tahay qancinta sharci kasta, qawaaniin, ama codsi dowladeed, ama inaan diidno inaan dhajinno ama ka saarno wixii macluumaad ah ama agab ah, gebi ahaan ama qayb ahaan, taas oo ah go'aankeena kaliya. aan habboonayn, diidmo ama ku xad gudub Shuruudaha Adeegga.
Waxaan xaq u lahaan doonnaa, laakiin aan waajib ahayn, inaan kormeerno waxa ka kooban guddiyada farriimaha ama astaamo kale oo is-dhexgal ah si aan u go'aamino u hoggaansanka heshiiskan iyo xeerarka kale ee hawlgalka ee aan dejino. Waxaan xaq ugu lahaan doonnaa go'aankeena kaliya inaan wax ka bedelno, diidno inaan dhajino, ama ka saarno wixii agab ah ee loo soo gudbiyo ama lagu dhajiyo boorarka fariimaha ama astaamaha kale ee is dhexgalka ah ee goobta. Marka laga tago xuquuqdan, isticmaalehu wuxuu si uun masuul uga ahaan doonaa nuxurka farriimahooda.
Waxaa lagaa rabaa inaad u hogaansanaato heshiiskeena markaad ka soo degsaneyso softiweerka degelkan. Laguuma oggola inaad soo dejiso ka hor intaadan aqbalin dhammaan shuruudaha iyo xaaladaha.
Goobaha Qaybta Saddexaad
Qaybo ka mid ah bogga ayaa laga yaabaa inay ku siiso xiriiriyeyaasha bogagga dhinacyada saddexaad, halkaas oo aad ka iibsan karto khadka tooska ah noocyo badan oo badeecooyin iyo adeegyo ay bixiyaan dhinacyo saddexaad ah. Annagu mas'uul kama nihin tayada, saxsanaanta, waqtiga, kalsoonida, ama qayb kasta oo ka mid ah badeecad ama adeeg kasta oo ay bixiso ama bixiso qof saddexaad. Dhammaan halista ay soo saaraan hareeraha goobaha saddexaad waa inaad adigu iskaa u qaadataa.
Waxaad ku raacsan tahay in anaga ama shirkadaha naga hooseeya ama bixiyeyaasha bogagga saddexaad aan mas'uul ka ahayn wixii dhaawac ah ee aad geysato, mana sheegan doontid wax sheegasho ah oo naga dhan ah ama iyaga, iyaga oo ka dhashay iibsashadaada ama isticmaalka alaab ama adeeg kasta oo ka socda boggayaga.
Isticmaalayaasha Caalamiga ah
Boggeena waxaa ku shaqeeya Waaxda Dhiirrigelinta Wax soo saarka ee Golden Laser. Golden Laser ma damaanad qaadayso in waxyaabaha ku jira bogga sidoo kale lagu dabaqo dadka ka baxsan Shiinaha. Waa inaadan isticmaalin goobta ama faylka dhoofinta adoo addeecaya Sharciga Dhoofinta ee Chine. Adiga ayaa ku xidhan sharciga deegaankaaga markaad marinayso boggan. Shuruudahaan iyo shuruudahan waxaa xukuma sharciyada Shiinaha ee xukuma awooda.
Waxaa laga yaabaa inaan, waqti kasta iyo ogeysiis la'aan, joojin, joojinno, ama joojinno xuquuqda aad u leedahay inaad isticmaasho goobta. Haddii ay dhacdo hakinta, joojinta, ama joojinta, mar dambe laguuma oggola inaad marin u hesho qaybta Bogga. Haddii ay dhacdo hakinta kasta, joojinta, ama joojinta, xaddidaadaha lagugu soo rogay ee ku saabsan waxyaabaha laga soo dejiyey goobta, iyo afeefyada iyo xaddidaadda deymaha lagu sheegay Shuruudaha adeeggan, ayaa badbaadi doona.
Golden Laser waa calaamadaha ganacsiga ee WUHAN GOLDEN LASER CO., LTD. Magacyada Wax soo saarka ee Golden Laser ayaa sidoo kale loo tixgeliyaa inay yihiin summad ganacsi oo diiwaangashan ama summad ka yar adeegsiga. Magacyada Badeecadaha iyo shirkadaha lagu soo bandhigay boggan iyagaa iska leh. Laguma ogola inaad isticmaasho magacyadan. Muran ayaa dhacay intii la isticmaalayay boggan waxaa lagu xallin doonaa gorgortan. Haddii weli aan la xallin karin, waxaa loo gudbin doonaa maxkamadda Dadka ee Wuhan iyadoo la raacayo Sharciga Jamhuuriyadda Dadka Shiinaha. Fasiraadda ku dhawaaqistaan ​​iyo adeegsiga degelkan waxaa loo aaneynayaa WUHAN GOLDEN LASER CO., LTD.